Apple waxay ku maalgelinaysaa 45 milyan oo doolar R&D-ga Corning Glass | Wararka IPhone
Toni Cortés | 10/05/2021 18:00 | dhowr
Apple wuu ogyahay sida ay muhiimka u tahay in lagu jajabiyo oo lagu xoqo muraayad adkaysi u leh qalabkaaga. Tusaale cad waa shaashadda Apple Watch. Muraayad Ion-X Qaabka aluminiumku wuxuu u xoqaa si ka fudud shaashadda safayr ee moodooyinka titanium iyo steel.
Iyo si aad uhesho shaashadaha adag, waxaad caawineysaa soo saaraha Muraayadda Corning horumarinta kristal cusub, xitaa adag. Waxaad uun maal gashatay $ 45 milyan shaybaarkaaga cilmi-baarista.
Apple Watch-kayga hore ee asalka ahaa (taxanaha 0) wuxuu ka sameysnaa bir, oo leh a Safayr. Waxaan isaga fariistay isaga oo jira saddex sano, iyadoo shaashaddu gebi ahaanba nadiif tahay. Midka labaad wuxuu ka sameysnaa aluminium shaashadda Ion-X. Toddobaad gudihiis markii la xidhanayey, kareemka ayaa durba la calaamadeeyay. Aad ayaan u cadeeyay in kan soo socda laga sameyn doono titanium, si loogu soo noqdo mar kale shaashadda safayr ee aan la burburin karin.
Tusaalahan fudud wuxuu ku noolaa qofka koowaad, waa lagu qancay sida ay muhiimka ugu tahay iska caabinta shaashadda qalab kuuskuus iyo xoqid. Apple way ogtahay tan, waxayna ka caawineysaa alaab-qeybiyeyaasheeda inay soo helaan muraayad aad iyo aad u badan intii suurtagal ah iska caabin.
Apple kaliya ayaa lagu kabayaa mid kale 45 malaayiin dollar, shaybaarka R & D ee alaab-qeybiyahaaga soo-bandhiga Corning Glass. Wuxuu mas'uul ka ahaa soo saarista shaashadaha iPhone, iPad iyo Apple Watch muddo dheer.
Cirbaddan cusub ee maaliyaduhu waa qayb ka mid ah "Sanduuqa Waxsoosaarka Horukacsan ee Apple." Sanduuq maalgashi oo loogu talagalay R&D ee alaab-qeybiyeyaasheeda. Halkaas ayay shirkaddu ku maalgashatay 200 malaayiin doolarka 2017 iyo 250 malaayiin inbadan 2019
Sidan ayaa lagu gaadhay koobkii "Ceramic Shield" ee iPhone 12
Maalgashigan awgeed, Apple iyo Corning Glass waxay soo saareen nooc cusub oo ah muraayad xoog badan, loona yaqaan «Gaashaanka dhoobada«, Iyo in ay horayba u fuushan tahay iPhone 12.
Waa nooc cusub oo muraayad ah oo lagu sameeyay kristantar nanoceramics. Bandhigyadan waxaa lagu soo saaray warshadda Corning ee Harrodsburg, Kentucky. Markaa waan arki doonaa haddii irbaddan cusub ee raasamaalka ah, ay maareeyaan inay "ikhtiraacaan" shaashad cusub oo loogu talagalay Apple Watch oo sidoo kale laga sameeyay dhoobada. Aad bay kuu fiicnaan lahayd.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Apple waxay ku maalgelinaysaa $ 45 milyan oo kale Corning Glass R&D